Basaska Qaboojiyaha Basaska ee shirkadda Double Decker iyo soosaarayaasha | SONGZ
Wax soo saarku wuxuu u qaybsan yahay fasallo dhawr ah iyadoo loo eegayo noocyada kala duwan iyo cabirka cutubyada isku aaddan. Marka loo eego qaab-dhismeedka, waxay badanaa u kala baxaan noocyo isku-dhafan iyo nooc kala-jaban.
Kajawaabida wicitaankii wadanka laga soo bilaabo 2014 ilaa maanta, Shiinaha wuxuu sidoo kale fuliyay tabo cusub oo dheeraad ah oo ku saabsan qaboojiyaha gadaal dhajinta markii ugu horeysay, wuxuu adeegsaday tikniyoolajiyadda qaboojiyaha korantada si aad u fahansan qaboojiyahayaga gadaal dhajinta ah, iyo soo saaray qaabab kala duwan oo kala duwan Badeecooyin si loo daboolo baahiyaha suuqa.
Taxanaha SZB, oo loogu talagalay 10-12m baska laba jibaaran
Kajawaabida wicitaankii wadanka laga soo bilaabo 2014 ilaa maanta, Shiinaha wuxuu sidoo kale fuliyay tabo cusub oo dheeraad ah oo ku saabsan qaboojiyaha gadaal dhajiyay markii ugu horeysay, wuxuu adeegsaday tikniyoolajiyadda qaboojiyaha korontada si aad u fahansan qaboojiyahayaga gadaal dhajinta ah, iyo soo saaray qaabab kala duwan oo kala duwan Badeecooyin si loo daboolo baahiyaha suuqa.
Faahfaahinta Farsamada ee Double Decker Bus A / C SZB Series:
Miisaanka kombaresarada (oo aan lahayn xajin)
Kondensarka (Tirada Fan)
14400 m3 / saac (6)
9000 m3 / saac (12)
Qaybta Qaybaha Saqafka
Miisaanka Qaybta Saqafka
1. Qaboojiyaha waa R134a.
4. Marinka hawada ee isku-xirka ku-meel-gaadhka ah ee ka soo baxa qaybta qaboojiyaha ilaa marinka hawada ee baska ayaa leh qaab gaar ah, markaa naqshaddu waa inay si buuxda u tixgelisaa hawlgalka rakibidda oo ay yareyso iska caabbinta marinka hawada. Xawaaraha dabaysha ee marinka kala-guurka waa inuu ahaadaa≤12m / s.
6. Waxaa ugu wanaagsan in si gooni gooni ah loo dejiyo shaashadda soo celinta hawada iyadoo loo eegayo saamiga mugga hawada ee dabaqyada sare iyo hoose. Ama si gooni ah ayaa loogu hagaajin karaa dabaqa sare, dabaqa hoosena wuxuu hawada ku soo celinayaa jaranjarada.
7. Fadlan nagala soo xiriir sales@shsongz.cn si aad u hesho fursado iyo faahfaahin dheeraad ah.
1. Qaado tiknoolajiyada soo-kabashada kuleylka biyaha ee tiknoolajiyada sare si loo yareeyo cadaadiska sarreeya ee nidaamka qaboojinta loona hagaajiyo saamiga waxtarka tamarta ee sheyga.
2. Qaab dhismeedka guud ee jirku wuu yaryahay cabirkiisuna waa miisaan fudud yahay.
3. Hormarin la habeeyay, qaabeynta qaabaysan, jawaab deg deg ah oo loogu talagalay baahida macaamiisha suuqa.
4. Waxaa jira noocyo badan oo badeecooyin ah, oo dabooli kara 10-12 mitir oo laba-lakab ah iyo hal iyo badh bas.
5. Mugga hawada uumi baxa waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalka si loo hubiyo soo saarida hawada oo isku mid ah.
Kiisaska Codsiga ee Double Decker Bus Air Conditioner SZB Taxanaha:
Hore: Xaaladda Qaboojiyaha Dhaqaalaha ee Baska, Tababaraha, Baska Iskuulka iyo Baska Gaarka ah
Xiga: Nadiifinta Hawada iyo Nidaamka Sunta Jeermiska
Kumbiyuutarka Hawada Basaska Loogu Talo Galay Double Decker Bus